Buka izixhumanisi zeGoogle Earth ku-Excel - futhi uziguqulele ku-UTM - Geofumadas
Novemba, 2017 Ukulanda, -Google Earth / Amamephu
Nginedatha kuGoogle Earth, futhi ngifuna ukubona ngeso lengqondo izixhumanisi ku-Excel. Njengoba ukwazi ukubona, izwe elinama-vertices ayi-7 nendlu enezingcezu ezine.
Londoloza idatha ye-Google Earth.
Ukulanda le datha, chofoza ngakwesokudla ku- "Izindawo zami", bese ukhetha okuthi "Londoloza indawo njengo ..."
Ukuze ube ifayela elinemigqa, amaphuzu kanye nezakhiwo engiziguqulele kuma-icons, ifayela ngeke ligcinwe njenge-kml elula kodwa njenge-Kmz.
Iyini ifayela le-KMZ?
I-kmz iqoqo lamafayela we-kml acindezelwe. Ngakho-ke, indlela elula yokuyiqhafaza njengoba sinjalo ngefayela le-.zip noma .rar.
Njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso olandelayo, kungenzeka singaboni isandiso sefayela. Ukuze senze lokhu, kufanele senze okulandelayo:
I-1. Ikhetho lokubona ukwandiswa kwamafayela kuvuliwe, kusukela kuthebhu ethi "Buka" yesiphequluli sefayela.
2. Shintsha isandiso sisuke ku .kmz siye ku-.zip. Ukuze wenze lokhu, ngokuchofoza okuthambile kwenziwa kufayela, futhi idatha engemva kwephoyinti ishintshiwe. Samukela umyalezo ozovela, ositshela ukuthi sishintsha isandiso sefayela nokuthi singawenza singasebenziseki.
3. Ifayela likhishwe uziphu. Inkinobho yesokudla yegundane, bese ukhetha "Khiphela ku ...". Esimweni sethu, leli fayela libizwa nge- «Geofumadas Classroom Terrain».
Njengoba singabona, ifolda yadalwa, futhi ngaphakathi ngaphakathi ungabona ifayela le-kml ebizwa ngokuthi "doc.kml" kanye nefolda ebizwa ngokuthi "amafayela" aqukethe idatha ehambisanayo, ngezithombe ezijwayelekile.
Vula i-KML kusuka ku-Excel
Iyini ifayela le-Kml?
I-Kml yifomethi eyenziwe yaziwa yiGoogle Earth, eyayingaphambi kwenkampani yeKeyhole, yingakho igama (Keyhole Markup Language), ngakho-ke, yifayela elinesakhiwo seXML (Ulimi lwe-eXtensible Markup). Ngakho-ke, ukuba yifayela leXML kufanele likwazi ukubukwa kusuka ku-Excel:
I-1 Sishintshe isandiso sayo kusuka ku- .kml kuya ku-.xml.
2. Sivula ifayela kusuka ku-Excel. Mina, ukuthi ngisebenzisa i-Excel 2015, ngithola umyalezo uma ngifuna ukuwubona njengetafula leXML, njengencwadi yokufunda kuphela noma uma ngifuna ukusebenzisa iphaneli yomthombo weXML. Ngikhetha inketho yokuqala.
I-3 Sifuna uhlu lwezixhumanisi zendawo.
I-4 Sizikopisha kufayela elisha.
Futhi i-voila, manje sesinefayela lezixhumanisi zeGoogle Earth, etafuleni le-Excel. Kusukela kumugqa wama-29, kukholamu X kuvela amagama ama-vertices, kanye nobubanzi be-latitude / longitude kukholamu AH. Ngifihle amakholomu athile, ukuze ubone ukuthi emigqeni engu-40 no-41 ungabona amapholigoni amabili engiwadwebile, nochungechunge lwawo lwezixhumanisi.
Ngakho, ngokukopisha amakholomu we-X nekholomu ye-AH, unezinhloso nezixhumanisi zamaphoyinti wakho we-Google Earth.
Sithemba ukuthi lokhu okungenhla kukusize ukuthi uqonde ukuthi ungagcina kanjani idatha ye-Google Earth efayeleni le-kmz, nokuqonda ukuthi ungadlulisa kanjani ifayela le-kmz ukuya ku-kml, ekugcineni ukuthi ubuka kanjani i-Google Earth isebenzisa i-Excel.
Unentshisekelo kwenye into?
Guqula idatha kusuka ku-Google Earth kuya ku-UTM.
Manje, uma ufuna ukuguqula lezo zixhumanisi zomhlaba ukuthi unesimo samadijithi wedesimali we-latitude nobude kuya kufomathi yokuqondisa okuklanyelwe i-UTM, ungasebenzisa ithemplate ekhona yalokho.
Yiziphi izixhumanisi ze-UTM?
I-UTM (i-Universal Traverso Mercator) iyisistimu ehlukanisa umhlaba emhlabeni wezizinda ze-60 ze-6 degree ngayinye, ishintshwe ngendlela yemathemathi ukuze ifane negridi ehlolwe ku-ellipsoid; njengaye ichazwa kulesi sihloko. futhi kule vidiyo.
Njengoba ukwazi ukubona, lapho ukopisha izixhumanisi eziboniswe ngenhla. Ngenxa yalokho, uzoba nezixhumanisi ze-X, Y kanye ne-UTM Zone emakwe kukholamu eluhlaza, kuleso sibonelo evela ku-Zone 16.
Thumela idatha kusuka ku-Google Earth ku-AutoCAD.
Ukuze ukwazi ukuthumela idatha ku-AutoCAD, kufanele usebenze umyalo wamaphoyinti amaningi. Lokhu kuthebhu ethi «Dweba», njengoba kukhonjisiwe emdwebeni ongakwesokudla.
Uma ususebenze umyalelo we-Multiple Points, kopisha bese unamathisela idatha kusuka kuthempulethi ye-Excel, kusukela kukholomu yokugcina, kuya kumgca we-AutoCAD umyalo.
Ngalokhu, izixhumanisi zakho zidwetshiwe. Ukuzibuka, ungasondeza / konke.
Ungathola ithempulethi nge Paypal noma Credit Card. Lapho wenza inkokhelo, uthola i-imeyili enesixhumanisi sokulanda. Ukuthenga isifanekiso kukunika ilungelo lokuthumela ukwesekwa nge-imeyili, uma kwenzeka unenkinga ngesifanekiso.
Thumela Previous«Langaphambilini Dweba izixhumanisi ku-AutoCAD kusuka kufayili ye-Excel CSV
Post Next Okuhlangenwe nakho kwami ​​kusetshenziswa i-Google Earth yeCadastreOkulandelayo »
Izimpendulo ezi-5 zokuthi "Buka izixhumanisi ze-Google Earth ku-Excel - bese uziguqula zibe yi-UTM"
Kuyinto amahloni, okuningi noma i-Google Earth ayivumeli ukudalwa kwama-polygoni nezici ze-precisão aceitáveis. Ukuqhafaza uhlelo lokusebenza lwe-GIS bese ulithumela ku-Google Earth.
UGília Josina uthi:
Ngingafaka kanjani i-polygon hhayi i-google emhlabeni?
Kubalulekile ukubeka amaphuzu okuqala bese uwafaka noma i-polygon ngendlela evamile ukuze uthumele indawo. Kodwa kwenzekani uma i-quando faço noma i-Zoom inikeza indawo yomsebenzi, noma i-ponto ne-sobrepõe ao noma i-polygon, ukukhetha ibanga elide lephutha phakathi kwe-polygon noma ponto.
Noma bheka, ngidinga ukungeza i-polygon hhayi i-google umhlaba (Kungenzeka ukuthi iphuma phambili, iphikisana)
Ngithemba ukuthi ngiyashintsha futhi ngiyongena emito obrigada!
hiep nguyenba uthi:
Faka ifayela le-imeyli, bese uchofoza ifayela le-imeyli, i-imeyli nguyenbahiep775@gmail.com. I-Rất cảm ơn anh.
Kulesi sixhumanisi kukhona amashidi amahle kakhulu ongawafumana kumakhokhi we-transcode
hi geofumadas, amathiphu amahle kakhulu ekusebenziseni i-google komhlaba, ingisiza kakhulu emsebenzini wami.
ukwesekwa, lapho ngingakwazi ukulanda IFOMU YOKUPHUMA ULIMI LWAMAGESHINI E-GEOGRAPHICAL (X, Y, Z) KU-UTM, ngidinga.
Ngilindele ukuphawula kwakho